“ကျန်းမာရေး အာမခံဆိုတာ…” - Young Insurance - Life
Phone09 4577 00 110 Monday - Friday9AM - 5PM OfficeNo.886/888, Pyay Road,9Miles, Yangon.
Home » Article » “ကျန်းမာရေး အာမခံဆိုတာ…”
Category : Article, Health | Date : November 22, 2019
သင့်မိသားစု၊ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်နေရတဲ့ လူနေထိုင်မှု စနစ်တွေ နဲ့ ကြုံနေရပြီလား...
အချိန်နေရာ ဒေသမရွေး မကျန်းမာစေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကြောင့် ထိတ်လန့်နေပြီလား...
ဒီအ‌ခြေအနေတွေကနေ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်‌ ကာကွယ်ဖို့ စောင့်ရှောက်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခု ရှာဖွေချင် ပြီလား...
ကဲ...မိတ်ဆွေ တစ်ခွန်းတည်းပြောရရင်တော့ အာမခံ စနစ်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးစွဲလိုက်ပါ ဆိုတာပါပဲ...
အာမခံ စနစ်ဆိုတာ ကြုံလာရတဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကနေ ရုတ်တရတ်ကြုံလိုက်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေကို ကာကွယ် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ စနစ်ဆိုတာ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ...
ဒါဆို... ပြင်းထန်ရောဂါကုသမှုအာမခံ ၊ လူထုအခြေပြုကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအာမခံနဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံ ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေး အာမခံ ရှိတယ်ဆိုတာရော သိပြီးပြီလား...
ဒီ အာမခံ အမျိုးအစားတွေကို ကိုယ့် မိသားစု၊ ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လောက်ထိ အထောက်အကူ ပြုတယ်ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ပါဦး...
ပြင်းထန်ရောဂါကု အာမခံ ဆိုတာ အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ လူ့ အသက်ကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ရောဂါ (၁၀) မျိုး အတွက် အာမခံ ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အသက် (၆)နှစ်ကနေ စထားနိုင်မယ်၊ ဒီ ရောဂါတွေ ဖြစ်လာရင် အာမခံ နှုန်းထားနဲ့ သက်တမ်း အတိုင်း အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမယ့် ဆေးကုသ စရိတ်မျှပေးတဲ့ အာမခံ အမျိုးအစားပေါ့....
လူထုအခြေပြုကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအာမခံ ကလည်း အသက် (၆) နှစ်ကနေ စထားလို့ရတာပါပဲ၊ ဒီ အာမခံ အမျိုးအစားကတော့ လူထုအခြေပြု အာမခံ အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် အကျိုးခံစားခွင့်မှာ မတော်တဆသေဆုံးမှုအတွက်ပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားတဲ့ အာမခံ အမျိုးအစားပေါ့...
နောက်ဆုံး ကျန်းမာရေးအာမခံကို ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ရောဂါကြောင့်(သို့) မတော်တဆမှုကြောင့် ဆေးရုံတက်ခြင်း၊ ရောဂါကြောင့် (သို့) မတော်တဆမှုကြောင့် သေဆုံးခြင်း တွေပါ အာမခံ အကာအကွယ်တွေကို ခံစားခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
တစ်နေ့တာ အတွင်းမှာ ထိတ်လန့်မှု အများဆုံး၊ ခြိမ်းခြောက်မှု အကြီးဆုံးပေးနိုင်တဲ့ ဘယ်ချိန်ရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ မကျန်းမာခြင်း ဖြစ်လာတဲ့ အခါ စိတ်ချလက်ချ နောက်ဆံမတင်းဘဲ ဆေးကုသနိုင်မယ့် အာမခံ အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေး အာမခံကို ယမ်းအာမခံမှာ ရယူနိုင်ပါပြီ....
ဒီတော့ ပြင်းထန်ရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့ရင် စိတ်မပူပါနဲ့...ယမ်းအာမခံ မှာ အာမခံ ထားလိုက်ပါ...
နှစ်ရှည် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အာမခံ ခံယူချင်တယ် စိတ်မပူပါနဲ့ ယမ်းအာမခံကိုသာ လှမ်းခဲ့လိုက်ပါ...
သင့် မိသားစု သင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကျန်းမာတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု အစောင့်အရှောက်တွေပေးဖို့ ယမ်းအာမခံ ကစောင့်ကြိုနေပါပြီ...
ကဲ...ကျန်းမာရေးအတွက် မိသားစု ကို လုံခြုံစွာစောင့်ရှောက်ရေးကို စိုးရိမ်နေတယ်ဆို ဘာမှမပူပါနဲ့ ယမ်းအာမခံ ရှိနေပါပြီ...
← ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံ | “အာမခံေၾကးေပးေလ်ာ္ျခင္း” →
Family Life Style (17)
Our CSR (10)
ဝန္ထမ္းမ်ား အက်ိဳးပြား ေစဖို႔
လုပ္ငန္းခြင္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအရာ
Young Insurance Life isaleading international private company in Myanmar which has established in 2013. We aim to broaden insurance industry and to increase awareness about insurance in Myanmar.
Young Insurance - Life
Copyright © 2019 - all rights reserved by Young Insurance-Life